Milan Ghimire calendar_today ८ चैत्र २०७६, 7:57 am
कैलाली । कोरोना भाइरस संक्रमणको आशंकामा तीन जनालाई धनगढीको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ ।
भारतबाट आएका उनीहरूलाई सीमामा चेकजाँच गर्ने क्रममा शंका लागेपछि अस्पताल भर्ना गरिएको अस्पतालको इमर्जेन्सी विभाग प्रमुख डा. जगदीश जोशीले जानकारी दिनुुभयो ।
तीनैजनालाई अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा भर्ना गरिएको उहाँले जानकारी दिनुुभयो ।
उनीहरूको खकार नमूना संकलन गरी शुक्रबार राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पठाइएको डा. जोशीले जानकारी दिनुुभयो ।
अखबारको रिपोर्ट सोमबार रिर्पो ट आउने डा. जोशीले बताउनुुभयो ।
सभारा : Onlinekhabr